Special Moment for Birthday Boy အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားလေး ဆာကာ – Miracle Times
Special Moment for Birthday Boy အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားလေး ဆာကာ
မြန်မာဘာသာဖြင့် အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Arsenal midfielder Bukayo Saka, one of the most prolific young players in the world, scoredabrace in England’s national friendly match against Andorra. 5th September is also his 20th birthday, so it will be even more fun for Saka.
In addition to club teammates, opponents playing for the national team also prayed for Saka’s birthday. Former Manchester United legend Roy Keane has insisted that Saka should be enjoying the moment with the National Team as the lack of happiness with Arsenal.
Despite being frustrated by the club’s position, Saka is clearly emerging on the international stage.
အတိုးတက်ဆုံးလူငယ်တွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘူကာယိုဆာကာ ဟာ အဂ်လန်အသင်းရဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာ ၂ ဂိုးဖန်တီး ၁ ဂိုးသွင်းပြီး အမှတ်ရစရာနေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲကစားတဲ့ စက်တင်ဘာလ ၅ရက် နေ့ဟာ သူ့ရဲ့အသက် ၂၀ ပြည့်မွေးနေ့လဲဖြစ်တာကြောင့် ဆာကာအတွက် ပိုပြီး ပျော်စရာဖြစ်နေမှာပါ။
ကလပ်အသင်းဖော်တွေအပြင် ၊ နိုင်ငံအသင်းမှာ တူတူကစားနေကြတဲ့ ပြိုင်ဖက်ကစားသမားများကပါ ဆကာရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်းကြီး ရွိုင်ကိန်းကတော့ ဆာကာအနေနဲ့ အခုလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ကလပ်အသင်း အာဆင်နယ် နဲ့မရနိုင်တာကြောင့် ပျော်သင့်တယ် ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကလပ်အသင်းရဲ့အနေအထားကြောင့် စိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဆာကာ ကတော့ နိုင်ငံတကာဘောလုံးဇာတ်ခုံမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ထိုးထွက်လာနေတာ သိသိသာသာမြင်နေရပါတယ်။
𝐂𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞𝐚 𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐬 အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်း
Evening News (12th Sep 21) ညနေခင်းသတင်းများ (စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်)